Madaxweynaha Soomaaliya oo lagu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay – Kalfadhi
January 16, 2019 January 16, 2019 Kalfadhi
MUQDISHO, 16 JAN 2019 (KALFADHI)-Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa goordhaw gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, halkaas uu kaga qeyb galayo Xafladda caleema saarka Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta-gareen.
Wafdiga Madaxweynaha ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Bayabdho waxaa ku soo dhaweeyay Madaxweyanha KGS, Guddoomiyaha Baarlamaanka KG iyo masuuliyiin kale oo katirsan maamulkaasi iyo Dowladda dhexe ee Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo ayaa loo gudbiyay xarunta Madaxtooyada halkaasi oo ay ka socoto Xafladda Caleema saarka Madaxweyanha KG.
Hore ayaa magaalada Baydhabo waxaa ku sugnaa Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Guddoomiye ku xigeenka 2-aad ee Aqalka Sare Mowliid Xuseen Guhaad iyo madax kale oo ka socotay maamul goboleedyada iyo beesha Caalamka. Dhamaan madaxdaan ayaa ka qeyb-galaya Xafladda maanta ka dhacaysa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Madaxweynaha KGS ee maanta la caleema saarayo ayaa hore uga tirsanaa Golaha Wasiirada Soomaaliya iyo Xildhibaanada Golaha Shacabka, waxa uuna ku soo baxay doorashadii muddo bil ku dhawaad ka hor ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.